विमानस्थलमा निर्वस्त्र पारिएका महिलाहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै, को हुन् उनि ? - jagritikhabar.com
विमानस्थलमा निर्वस्त्र पारिएका महिलाहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै, को हुन् उनि ?
दोहा विमानस्थलमा निर्वस्त्र पारिएका अस्ट्रेलियाली महिलाहरूले कतार सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएका छन्। सन् २०२० को अक्टोबरमा हमाद विमानस्थलमा नवजात शिशु भेटिएपछि ती महिलाहरूलाई उड्न तयारी रहेको विमानबाट ओरालेर निर्वस्त्र पारिएको थियो।
सुत्केरी भएको आशंकमा निर्वस्त्र महिलालाई परीक्षण गरिएको थियो। कतार एअरवेजको विमानबाट ओरालेर एम्बुलेन्समा राखिएका महिलालाई नर्सहरूले भित्री वस्त्र फुकाल्न लगाएरजाँच गरेका थिए।
निवस्त्र पारिएको घटनाबारे महिलाहरुको विरोधपछि कतारले माफी मागेको थियो। कतारका तत्कालिन प्रधानमन्त्री खालिद अल थानीले सरकारका तर्फबाट क्षमा मागेका थिए। घटनामा संलग्न विमानस्थलका एक अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए।
करिव पाँच मिनेट परीक्षणगरेपछि उनीहरूलाई पुनः विमानमा चढाइएको थियो। अस्ट्रेलियामा उत्रिएपछि पीडितहरूले प्रहरीलाई उजुरी दिएका थिए। सो घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको थियो।
तेस्तै, सेना नियन्त्रित म्यानमारको अदालतद्वारा ११ वर्षको जेल सजाय सुनाइएका अमेरिकी पत्रकार ड्यानी फेन्स्टर ३ दिनमै रिहा भएका छन्।फ्रन्टियर म्यान्मारको लागि काम गर्ने अमेरिकी पत्रकार फेन्सटरलाई गत मे महिनामा अमेरिका जान अगाडि हिरासतमा लिइएको थियो।
तर ११ वर्षको जेल सजाय सुनाइएका उनी जेल सजाय सुनाइएको तेस्रो दिन नै रिहा भएको बीबीसीले जनाएको छ।उनीमाथि आप्रवासन नियमको उल्लंघन, गैर कानूनी सम्पर्क र सेनाविरुद्ध मानिसलाई भड्काउने काममा लागेको आरोप लागेको थियो।
उनी दोषी सावित भएका थिए। गतहप्ता त सेनाले उनीमाथि राजद्रोह र आतंकवादको मुद्दा पनि लगाएको थियो। उनलाई अधिकतम सजाय जीवनभर जेल सजाय हुन सक्थ्यो।
फेन्सटरलाई अचानक रिहा गरिनुको कुनै कारण खुलाइएको छैन। तर शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको दबाबका कारण सेनाले उनलाई रिहा गरेको अनुमान गरिएको छ।
तेस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको बहुप्रतिक्षित भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा दुबै देशका नेताहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउने बाचा गरेका छन्।
भर्चुल बैठकलाई सुरुमा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई द्वन्द्वमा रुपान्तरण गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। बाइडेनले सो धारण राख्न नपाउँदै चीनका राष्ट्रपति सीले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई सकरात्मक दिशातार्फ लैजान बेइजिङ तयार रहेको जबाफ दिएका थिए ।
बाइडेनलाई ‘मेरो पाको मित्र’ भनेर सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले दुई प्रतिद्वन्द्वी देशले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।त्यसपछि बाइडेनले एक अर्कासँग बढी औपचारिक हुनुपर्ने भन्दै दुबै जनाबीच यसअघि इमान्दारीपूर्वक टेलिफोन वार्ता भएको स्मरण गरेका थिए ।
जबाफमा राष्ट्रपति सीले दुई शक्तिशाली देशले एकआपसमा सहकार्य गर्दा दुबै देशलाई फाइदा हुने बताएका थिए । ‘चीन र अमेरिकाले सञ्चार र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति बाइडेनले मानवअधिकार र हिन्द महासागर क्षेत्रका मुद्दालाई उठाएपछि राष्ट्रपति सीले दुबै देशले एक अर्कालाई सम्मान गर्ने र स्थिर सम्बन्ध आवश्यक भएको चीनका जबाफ दिएका थिए ।
बाइडेनले दुई देशबीच चुनौती खडा भइरहेको बताइरहेका सीले सञ्चार सुधार गरेर ती सबै चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुबीच ताइवानको विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो ।
एक साताअघि अमेरिकी सांसदको प्रतिनिधिमन्डलले ताइवान भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणको अमेरिकाले विरोध गरेको थियो । त्यस अगाडि चीनले ताइवानको हवाई आधारमा लडाकु विमान उडाएको थियो ।
त्यसको ताइवान र अमेरिका दुबैले विरोध गरेका थिए । चीनले ताइवानमाथि हमला गरे अमेरिकाले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।